Fijoroana ho Vavolombelona: Ahoana no voavonjy aho | Apg29
Fijoroana ho Vavolombelona: Ahoana no voavonjy aho
Indray andro, nahatsapa aho fa ny Tompo dia tena nitsangana sy nandresy ny Kalvary.
Ny Tompo dia nahalala ihany izay efa no mandray ahy. Ary aoka aho hamaky sy hahatakatra ny fetran'ny mety ho vitan'ny siansa. Indray andro, nahatsapa aho fa ny Tompo dia tena nitsangana sy nandresy ny Kalvary.
Bebe ahy mbola kely finoana, fa tsy nandeha tany am-piangonana. Ny fandraisana ho mpikambana dia mahavariana, nefa dia tsy tsara. Namaky ny sasany teolojia, fa virrade.
Ny fahamarinana tafiditra ny adala, ary natao batisa aho. Ny Kristianina tao an-tanàna dia lehibe fanampiana. Nalen tamin'ny kely dia mifaritra fotsy mangirana.
Nitarika ny mizarazara trano, dia tsy hatao rehefa fihadiana ny karavasy avy amin'ny ankavia, fa koa ny havana maro no voavonjy. Alahelo sy fifaliana. Ny fifohazana dia avy amin'ny alahelo sy fifaliana, toy ny Pentekotista hoy pasitera raha nandry tamin'ny taloha kelin'ny nahafatesany.
Ny Tompo dia tsy mandray antsika Toy izany koa, satria manana filàna isan-karazany. Chris nihira hira tranainy tsara tarehy, ary mitenena amin'ny fo. Misy mpitory miteny marina ny Tenin'Andriamanitra. Misy fitaovana fandraisana antso maika bebe mianatra Baiboly. Ny sasany, toa ahy, tokony mba hifanaraka ho maro Siantifika lahateny.
Tompo manomboka avy ambany rehefa miasa. Ny sy ny hafa 'mbola kely dia mahatsiravina amin'ny kapoka sy ny fahoriana. A fitahiana miafina. Jehovah nihaino ny zaza nitomany izay Ismail dia natsipy ambany roimemy anankiray.
Tsy ny rehetra dia zanaky ny taranaka maro ny Kristianina, fa nisy Kristianina mahatoky eo amin'ny fianakaviako any amin'ny 1800s. Batista mpitandrina fito nandeha tany Etazonia no maty ary ny iray amin'ny maha-misiônera amin'ny Congo.
Ary naka ny fotoana ny vaovao. Dia niditra an-tsehatra ny Tompo fa ho avy marina.
Izany no fijoroana ho vavolombelona sy ny mailaka mpamaky. Indro, ny hevitra no mpanoratra.
V 04, tisdag 26 januari 2021 kl 05:56